समाचार - गर्मी संक्रान्ति यहाँ छ
हामी यस वर्षको जून २२, चन्द्र क्यालेन्डरको ग्रीष्म संक्रान्तिमा प्रवेश गरेका छौं। ग्रीष्म संक्रांति पहिलो सौर शब्द हो जुन चौबीस सौर सर्तमा निर्धारित गरिन्छ, जसको अर्थ तातो मौसमको आधिकारिक सुरुवात हो, र त्यसपछि मौसम तातो र तातो हुन्छ।
चौबीस सौर शब्दहरू पुरानो खेतीपाती सभ्यताको उत्पादन हो र यसमा चिनियाँ राष्ट्रको लामो सांस्कृतिक अर्थ र ऐतिहासिक संचय हुन्छ। यो मूल रूपमा रातको आकाशमा बिग डिपरको निर्देशनमा आधारित थियो जुन समयका साथै कृषि उत्पादनहरू निर्देशित गर्न अग्रसरहरू थिए। वर्तमान "चौबीस सौर सर्तहरू" 300०० भन्दा बढी वर्ष पहिले स्थापित सौर्य देशान्तरको आधारमा डिभिजनबाट आउँदछ। त्यो हो, "इलिप्टिक" को एक 360 year० डिग्री सर्कलमा (एक बर्षमा आकाशीय गोलामा सूर्यको स्पष्ट मार्ग), यसलाई २ equal बराबर भागमा विभाजन गरिएको छ, हरेक १ 15 डिग्रीमा बराबर भाग, गोर्वा विषुवको रूपमा ० डिग्रीको शुरुवात बिन्दु, देशान्तरको डिग्री अनुसार मिलाइएको। ऐतिहासिक विकासमा, "चौबीस सौर शब्द" लाई चन्द्र पात्रोमा समावेश गरीएको थियो र चंद्र क्यालेन्डरको एक महत्वपूर्ण हिस्सा भयो। वर्तमान जीवन र उत्पादनमा, चौबीस सौर शब्दहरू अझै पनि कुनै न कुनै संदर्भको रूपमा प्रयोग गर्न सकिएला पनि, यसको शुद्धता र सटीकता आज व्यक्तिहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन।
त्यसोभए कुन उपकरणले जीवन र कृषि उत्पादनको लागि उत्तम निर्देशन प्रदान गर्न सक्छ? एमाटेको भर्खरको मौसम स्टेशनले वास्तविक समय डाटा र हावा दिशा र वर्षाको डायक्रॉनिक रेकर्डहरू प्रदान गर्दछ; योसँग सही मौसम पूर्वानुमान कार्यहरू पनि छन्; उही समयमा, हामीसँग बहु-च्यानल मौसम पूर्वानुमान मौसम स्टेशनहरू छन जुन तपाईंलाई आगामी days दिन अगाडि मौसमको अवस्थाको बारेमा बताउन चाहन्छन्, र यात्रा र योजनाको राम्रो उत्पादन योजना गर्दछन्। विवरणहरूको लागि हाम्रो व्यावसायिक बिक्री टीमसँग परामर्श गर्न स्वागत छ!
पोष्ट समय: जुन २२-२२१२